Nezvedu - Bengbu Dongli Chemical Co, Ltd.
Yakasimba acid cation yekuchinjana resin
Asina kusimba asidi cation yekuchinjana resin
Yakasimba base anion exchange resin
Simba risina kusimba anion exchange resin
Yakavhenganiswa mubhedha resin
Bengbu Dongli Chemical Co, Ltd. inotungamira inogadzira akasiyana siyana epamusoro giredhi ion kuchinjana resini muChina. Dongli's indasitiri yechigadzirwa mitsara inovhara SAC, WAC, SBA, WBA, MIXED BED uye hunyanzvi resin ine goho repagore re20000MTs (25000 M3) inorondedzerwa seyemabhizimusi giredhi, giredhi rekudya, giredhi rekurapa, giredhi remagetsi yakazara mazana emhando. Dongli iguru-hukuru hunyanzvi hwokugadzira ion resin resin uye adsorption resin muChina.
Makondinendi ekuparadzirwa kwemusika
Mari yekutengesa mu2020
Chigadzirwa Classfication Uye Grading
Seimwe nyanzvi yekugadzira ion resin resin, isu tinogadzira nekugadzira akasiyana mabhuru kubva ku0.35-1.25mm, <0.3mm uye> 1.2mm, pamwe neiyunifomu yesaizi size inoshandiswa mumaindasitiri senge magetsi chiteshi, mvura yekunwa, mishonga, biotechnology uye hydrometallurgy zvinoenderana nezvigadzirwa zvedu kuti zviparadzanise, kubvisa, kudzoreredza kana kushambadzira chaiwo zvinhu nemakomponi. Izvo zvinoshandiswa hazviperi.
takavakwa kupa mhinduro dzakagadziriswa uye kubatsira kugadzirisa matambudziko ako akaomarara.
Isu tinoedza kukwana, kugutsikana kwevatengi!
Kugadzira Unyanzvi Kutanga
Kubva muna2020, goho repagore rakasvika matani 21000 (approx 27000 cubic metres), ichifukidza rondedzero yedu yakawanda resin dzakateedzana muSAC, WAC, SBA, WBA, Mubhedha wakasanganiswa, resini dzakasarudzika nezvimwe.
Mune zvigadzirwa zvedu zvinotumirwa kunze, SAC resin yakatora chikamu chikuru, yechipiri yaive SBA, ichiteverwa neyakavhenganiswa mubhedha resin uye sepcialty resin.
Mune izvi zvigadzirwa zvinotumirwa kunze, chikafu giredhi yechikafu yainyanyo kufarirwa nemisika uye yakanyatsogadziriswa nevatengi nekuda kwezvinodiwa zvakanyanya kudzivirirwa kubva pasociet societ.y
Iyo kambani ichabatsira kunzanga nezvigadzirwa zvakavimbika uye masevhisi akakwana. Gamuchirai shamwari kubva kumatunhu ese ekushanyira Bengbu Dongli Chemical Co, Ltd. yekutungamira uye kutaurirana kwebhizinesi.
Isu tinodada kuti isu takamisa hwakawanda hunyanzvi hwekudyidzana nenyika-kirasi resini inogadzira uye nyanzvi dzemakemikari kuti vawane zvinodiwa nevatengi vanobva munzvimbo dzakasiyana dzeindasitiri, vawana "akawanda-kuhwina" mhedzisiro.
Isu tinoramba takatarira pane inogara-inogara kuvandudzwa kwehunhu hwechigadzirwa uye ruzivo rwevatengi nguva dzese kuti uve nani kugadzirisa-kugadzirisa.
Yangzhuang Road, Guzhen Economic Development Dunhu, Bengbu, Anhui, China
Runhare:0086-552-6073152 / 0086-552-6073151
Kune chero kubvunza pane zvigadzirwa zvedu, mitengo, inzwa wakasununguka kuti utaure nesu, tichadzoka mumaminetsi mashoma.